Inona no mpamatsy vola cryptocurrency Nanoro hevitra ny mivarotra, ary izay olona mitandrina? - Blockchain News
Ny faran'ny volana May nanahiran-tsaina ny crypto orinasa amin'ny bearish malaza fanonganam-panjakana eo amin'ny fifanakalozana. Tao anatin'ny trimester ny May, ny TOP-25 cryptocurrency nampiseho ny fitarainana fitontonganan'ny. Noho izany, May 22, bitcoin niankohoka ambany $ 8000 voalohany hatramin'ny Aprily 18. Etera sy Bitcoin Cash rendrika 14% tao anatin'ny herinandro, EOS – ny 6%, ary XRP – ny 8.5%. Ny hany mpandresy fa herinandro dia Tron (TRX), izay nitantara ny fitomboana kely ao amin'ny teny nalaina.
Ny fironana ny iray amin'ireo tsena lehibe mpanamarika – ny tahan'ny ny cryptocurrency mpivady ny Ethereum sy Bitcoin – Niova koa ny midina iray. Noho io, Altcoins hafa, miorina amin'ny Ethereum blockchain sy, noho izany, ampahany miankina eo amin'ny toerana, Mety ho latsaka mafy, raha ny tahan'ny bitcoin mbola mandà. Mandritra izany fotoana izany, ny fitambaran'ny cryptocurrencies tsena capitalization nihena ny $ 322.5 lavitrisa, miletsy ny amin'ny 14% raha oharina amin'ny faharoa trimester Mey.
Inona no tokony hatao mpivarotra ao amin'ny tsena, izay Hay ho bearish faladiany? Vao haingana, barotra mpampiasa vola dia efa nahay tsara tarehy ny olana ny cryptocurrencies ary efa mafy mpivarotra fanoroana hevitra izay tokony hividy, izay tokony hitandrina sy izay nivarotra. Na dia tamin'ny volana Janoary ity eo fironana lehibe Fiat mpampiasa vola dia tsy dia mazava.
Cryptocurrency mpampiasa vola fahazoan-dalana
Ohatra, Spencer Bogart, ny mpiara-miombon'antoka ao amin'ny Blockchain Renivohitra, dia mino fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao eo amin'ny fifanakalozana dia mahasoa ho mahomby fividianana. “Koa satria vao haingana bitcoin nampiasaina matetika kokoa hatrany ary mbola maro ny andrim-tombontsoa, tsy hanenenana mampiasa vola ao. Ny lehibe rehetra banky miezaka miasa aminy, hanatitra ny mpanjifa. Misy sehatra ara-barotra malalaka. Ny lalina institutionalization ny bitcoin amin'ny ankapobeny tsara, “Hoy ny mpandahateny.
Na dia eo aza ny midina eto amin'izao tontolo izao fihetsehana voalohany cryptocurrency, Bogart Tena bullish momba ny hoavy. “Mety ho mora kokoa bitcoin? Azo antoka. Ve anefa Mino aho fa isan-taona ny antokony, dia ho ambony kokoa? tena azo antoka, “- dia nanazava tao amin'ny tafatafa for CNBC.
tsara vinavina, na izany aza, Tsy mihatra amin'ny altcoins. “Maro cryptocurrencies no overvalued sy tsy azo antoka. Misy vintana fa ho “mitifitra”, fa sakana maro izy ireo noho izany, “hoy Bogart.
Barotra iray hafa mpampiasa vola maka fahazoan-dalana hiditra ny hodinihintsika Cardano (Ada), Tron (TRX), IOTA (hatramin'ny) ary Neo (Neo).
Mahaliana, Ary ny amin'ny Ethereum Spencer Bogart dia fa malina. “Ny zavatra, misy be dia be ICO ny Ethereum blockchain. Tsy fantatra izay hanjo izany tetikasa izany ary inona no vokany eo amin'ny mazava ho azy namoahany ho fanta-Ethereum,” dia naneho hevitra. “Etsy ankilany, Aho hihazona ao amin'ny kitapom-bola izany mpilalao be toy ny Ripple, Bitcoin Cash sy ny EOS.”
Crypto hafa mpankafy ihany koa maneho fa malina vinavina. “Izay tokony hatao amin'ny bearish fironana, izay, teny ao amin'ny fitaovana, Tsy voamarina ny na inona na inona? Tsy dia tena tsy mendrika ny mividy cryptocurrency in tombantombana mba. Raha toa ianao ka handeha hitondra zavatra ho enim-bolana na herintaona, dia aza maka na inona na inona. Raha toa ianao ka efa nitoetra tao amin'ny maharitra portfolio-tetika, dia manana, satria amin'ny fohy ezaka fironana tsy fantatra mazava na ho azo atao ny hitsambikina dia hitsambikina avy indray amin'ny vidiny tsara kokoa. Mivarotra ihany no dikany raha toa ianao ka matihanina mpivarotra. Fa na dia afaka varotra, raha ny tena izy, ara-teknika ihany rebounds, Na izany na tsy izany dia tsara kokoa ny mitandrina ny fananany. Amin'ny ankapobeny, ny fangatahana dia ny mitandrina ny altcoins amin'ny ambany capitalization, satria ny tsena ankehitriny fandaminana teo, ary ny altcoins taorian'ny bitcoin indraindray dia hilentika kokoa.
Izay tokony hatao amin'ny toe-javatra ny ara-toekarena ao an-tsena, mpivarotra tsirairay manapa-kevitra ho an'ny tenany. Ny zava-dehibe indrindra dia ny tsara mamorona portfolio-ny cryptocurrency fa tsy mikorapaka raha misy fiovaovan'ny ao an-tsena. Indrindra fa toy izany mikorontana toy ny cryptocurrency.
Ahoana no very Efa ho 200 Bitcoin varotra ity volana lasa
Ny fianarana tantara ...
2017 i extraord ...
Ny Arizona House solontena vato fa ny hetra amin'ny vola azo cryptocurrency
Manan-danja iray ao amin'ny A komity ...